Heshiiska wadajirka ah ee 'SYNTEC-CINOV': waa qiime go'an saacado gudahood oo loogu talagalay shaqaalaha hoos imanaya habka 2 "waxqabadka hawlgallada"
Qof shaqaale ah wuxuu u shaqeeyey sidii falanqeeye hawleed ee shirkad IT ah. Iscasilaadiisa kadib, shaqaaluhu wuxuu la wareegay maxkamadda wershadaha. Wuxuu si gaar ah uga horyimid ansaxnimada heshiiska qiimaha go'an ee saacadaha ah ee lagu soo rogay iyadoo la adeegsanayo heshiiska wadajirka ah ee SYNTEC-CINOV.
Heshiiska sicirka ee shaqaaluhu wuxuu tixraacay habka 2 "fulinta howsha", oo ku xusan heshiiska 22 Juun 1999 ee la xiriira saacadaha shaqada (cutubka 2, qodobka 3).
Qoraalkani wuxuu si gaar ah u bixinayaa in qaab-dhismeedka 2 uu khuseeyo shaqaalaha aan khusaynin heerarka caadiga ah ama waxqabadka hawlgallada leh madax-bannaanida buuxda Duubista waqtiga shaqadooda waxaa lagu sameeyaa maalmo, iyadoo la xakameynayo waqtiga shaqada sanad walba la qabto.
Mushaarkooda waxaa ka mid ah kala duwanaansho kasta oo saacadle ah oo lagu dhammeeyo xadka qiimihiisu ugu badnaan yahay 10% jadwalka toddobaadlaha ah ee 35 saacadood. Ugu dambeyntiina, shaqaalahan uma shaqeyn karaan wax ka badan 219 maalmood shirkadda.
Xaaladdan oo kale, shaqaaluhu wuxuu marka hore tixgeliyey inuusan ku dhicin qiimo go'an
SYNTEC-CINOV: heshiiska qiimaha go'an ee fulinta howlaha waa inaan lagu qaldin maalin go'an! July 8th, 2021Tranquillus
horeDhamaadka qandaraaska: bayaanka kooban ee qorshooyinka keydinta shaqaalaha oo lagu daray macluumaad cusub
socdaXiriirka jaceyl ee ku dhamaada si xun shaqada: Sababta shaqada looga eryo?